March 1, 2021 - Babal Khabar
धादिङ : त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ सल्यानटार खोल्सी नजिकै डोजरको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। डोजरको ठक्करबाट स्थानीय ४५ वर्षीया सरस्वती कुमालको मृत्यु भएको हो। सडक निर्माणका क्रममा निस्किएको माटो फाल्दै गरेको डोजरले घाँस काटेर फर्किँदै गरेकी सरस्वतीलाई ठक्कर दिएको थियो। डोजरको ठक्करबाट ढलेकी उनको शव माटोमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनास्थलमा रहेका स्थानीयका अनुसार डोजरको ठक्करपछि घाइते भएकी उनलाई उठ्न नभ्याउँदै डोजरले माटो हालेर पुरेको थियो। घटनापछि डोजर चालक फरार छन्। ठक्करबाट घाइते भएकी महिलालाई डोजर चालकले उद्धार गर्नुको साटो माटोले पुरेको हत्या गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले डोजरमा आगजनी गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक अरुण कुशवाहले डोजर चालक र ठेकेदारलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको जानकारी दिए।
१७ फागुन, हेटौंडा । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता एवं पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । प्रेस संगठन नेपाल बागमती प्रदेशको हेटौंडामा सोमबार आयोजित दोस्रो भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको गल्तीप्रति आत्मालोचनासहित पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र उनले त्यसो गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा अदालतले फैसला दिएसँगै उनी निराश बनेको उनको भनाइ छ । पत्रकारले ‘कू’ को समर्थन गरे नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर ‘कू’ गर्दा समेत केही पत्रकारले त्यसको विरोध गर्नुभन्दा पनि ताली पिट्दै समर्थन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले देशमा भएको आमुल परिवर्तनमा
१७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’ ‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु । केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै हो भन्ने फैसला हुन्छ । यसमा एक इन्चपनि शंका गर्नु पर्दैन’ उनले अघि भने । के प्रचण्डले भने जस्तो निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता विवादमा निर्णय गर्दैछ त ? आयोग स्रोतका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले २० माघमा दिएको निवेदनबारे छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो दुई दिनयता तीन विकल्पमा लगातार छलफल भइरहेको छ, तर आयुक्तहरु कुनै टुंगोमा पुगेका छैनन् । पहिलो : हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने । दोस्रो : विवादमा प्रवेश गर्ने
१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । गत फागुन ४ गते पनि एक हप्ता नबित्दै मूल्य बढाइएको थियो । डिजेल, पेट्रोल र मटितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँले मूल्य बढाईको निगमद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै हवाई इन्धन बाहृयतर्फको मूल्य पनि एक किलोलिटरमा २५ अमेरिकी डलरले वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।
बर्दिया — बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नवरंग बाँझपुर सामुदायिक वनमा गाई,भैंसी चराउन गएका एक व्यक्तिको बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गएको छ । सोमबार दिउँसो २ बजेतिर बाघले आक्रमण गर्दा राजापुर नगरपालिका-१० कालाबन्जरका ६२ वर्षीय लालबहादुर चौधरीको मृत्यु भएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले बताए । उनीसँगै गएका अन्य गोठालले भागेर निकुञ्जलाई जानकारी गराएका थिए । निकुञ्जबाट हात्तीसहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले खोज तलाश गर्दा साँझ ६ बजे झाडीमा मृत अवस्था चौधरी फेला परेका थिए । उक्त घटना सदरमुकामदेखि करिब ५० किमी पश्चिममा भएको हो । गत असार यता बाघको आक्रमणबाट गेरुवा गाउँपालिका र मधुवन नगरपालिकामा ७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
काठमाडौं, १७ फागुन । अहिले जताततै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यासै शिलान्यासका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन् । १५ दिनमा दलबलसहित दर्जनौँ सिलान्यासका गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस बीचमा मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी पुल तथा अन्य आयोजनाहरुको शिलान्यास गरेर रेकर्ड नै तोडेजस्तो देखिन्छ । सर्सती हेरौँ प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन महिनाको बीच अवधिमा विभिन्न मितिमा शिलान्यास गर्नुभएका पुल तथा अन्य योजनाहरु: – फागुन १६ गते आइतबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नं.५ को दमक र कमलमा ४ वटा पुलको उद्घाटन र ३१ वटा पुलको शिलान्यास – फागुन १ गते बुटवल उपमहानगरपालिका–३ चिँडियाखोलाबाट पाल्पाको तिनाउको वसन्तपुर डाँडा जोड्ने हिलस्टेसनसहितको केबलकार आयोजनाको शिलान्यास, आउँदो फागनु १ गते त्यसको उद्घाटन गरिने – फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार चन्द्रागिरी नग
काठमाडौँ, १७ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोग संग रहेको सेटिङ छिटै छताछुल्ल हुने बताउनुभएको छ । पेसागत महासङ्घ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घबीचको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टीको आधिकारिकता आफुहरुले नै पाइसकेको बताउनुभएको हो । निर्वाचन आयोगसँगको छलफल, कुराकानीका आधारमा ओलीको सेटिङ भत्किन लागेको र आफुहरुले आधिकारिकता पाउने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभएको हो । साथै उहाँले प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलापछि उल्टो केपी ओलीले जिते जस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रचण्डले ओली पक्षमा लागेका कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा लाग्न आग्रह गर्दै सर्वोच्चको सेटिंग भत्केपछि अब निर्वाचन आयोगको सेटिंग पनि भत्किने दाबी गर्नुभयो । प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले छिट्टै आफुहरुको पक्ष
पोखरा, १७ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौँठो नमान्न भन्नुभएको छ । सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आफूमाथि हमला हुनसक्ने बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सम्पूर्ण रुपले ममाथि प्रहार भएको छ, अत्यन्तै तीव्र रुपमा भएको छ । शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला ।’ आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकार जान नदिन उनले कार्यकर्ताहरुलाई अपिल गर्नुभएको छ । ‘म रहिँन भने पनि केही छैन, पार्टी छ । आन्दोलन छ । देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा लैजान दिनुहुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठक यही फागुन २३ गते दिउँसो ४ बजे बस्न आह्वान गरिन रास्ट्रपतिले
काठमाडौँ, १७ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक यही फागुन २३ गते दिउँसो ४ बजे बस्न आह्वान गर्नुभएको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २३ गते ४ बजेका लागि संसद अधिवेशन बोलाइएको पुष्टि गरेको हो । file photo पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिद्वारा सोही दिन संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय उल्याएर संसदको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
वि.सं. २०७८ मा तीन दशैं परेको छ ।
१७ फागुन, काठमाडौं। वि.सं. २०७८ मा तीन दशैं परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैं परेको छ । वैशाख ७ गते मंगलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ । यसैगरी विसं २०७८ को चैत २६ गते शनिबार पनि अर्को चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं परेको छ । बडादशैंका रूपमा मनाइने आश्विन शुक्ल पक्षको दशैं आगामी वर्ष असोज २१ गते बिहीबार घटस्थापना गरेर सुरु हुने भएको छ । असोज २७ गते बुधबार महाअष्टमी, असोज २८ गते बिहीबार महानवमी र असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ । कात्तिक कृष्ण पक्षमा सुरु भएर शुक्ल पक्षमा सकिने तिहार कात्तिक १६ गते मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ । दशैं र तिहारलाई नेपालमा विशेषरूपमा मनाइन्छ । लक्ष्मीपूजा कात्तिक १८ गते बिहीबार र भाइटीका कात्तिक २० गते शनिबार परेको छ । चैत्र शुक्ल